Wararka - Silicon carbide dhoobada dhoobada
Sababtoo ah adkeyntiisa sare, caabbinta daxalka sare iyo xoogga heerkulka sare, ceylics carbide ceramics ayaa si ballaaran loo isticmaalay. Inta badan waxaa jira dhinacyada soo socda: Silicon carbide dhoobada waxay leeyihiin iska caabin daxalka kiimikada wanaagsan, xoog sare, adkaansho sare, iska caabin abrasion wanaagsan, isdhaafsi yar oo khilaaf ah, iyo iska caabin heerkulka sare, sidaa darteed waa sheyga ugu fiican ee soo saarida siddooyinkaba. Marka lagu daro walxaha garaafka, iskudhafkeeda khilaafku wuu ka yaryahay kan alumina ceramics iyo aalado adag, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa qiyamka sare ee PV, gaar ahaan xaaladaha shaqada ee rarida asiidhyada adag iyo alkalis.
Silicon carbide bamka dhoobada waxay leedahay adkaansho sare, awood sare, heerkul sarre iyo caabbinta daxalka, iyo astaamo kale, marka la barbardhigo nolosha adeegga bamka biraha caadiga ah, isla goobta saldhiga waa dhowr jeer waqtigeeda ama ka badan.
Ikhtiraaca cilmiga iyo farsamada ayaa ah udub dhexaadka u ah shirkadaha bamka dhoobada dhoobada ee silikoon Hoos u dhaca dhaqaalaha Shiinaha sanadihii la soo dhaafay, shirkadaha wax soo saarka badankood waxay rajeyn karaan oo kaliya soo kabashada dhaqaalaha marka lagu daro xakamaynta kharashaadka wax soo saarka. Khubaradu waxay rumeysan yihiin in xaaladda adag ee dhaqaale, soo-saarayaasha ay khuseyso ay tahay inay kordhiyaan xoogga hal-abuurnimada sayniska iyo teknolojiyada, halka laga helayo tayada, kharashka iyo cilmi baarista iyo horumarka, iyo dhinacyada kale ee dadaalka loogu jiro in suuqa lagu kala baxo.